Nhau - Maitiro Ekugadzirisa Ruvara Faded Matambudziko Mune Silk
Kugadzikana, kupenya, kufema, kutambanudza, kusimba, uye zvimwe ndizvo zvaunowana kubva kusiriki.
Kukurumbira kwaro munyika yefashoni hakusi kubudirira kwazvino. Kana iwe ukashamisika nepo ichidhura kupfuura mamwe machira, chokwadi chakavanzwa munhoroondo yacho.
Shure kumashure apo China yaitonga indasitiri yesirika, yaionekwa sechinhu chepamusoro. Madzimambo chete nevanhu vakapfuma ndivo vaikwanisa. Yakanga yakakosha kwazvo zvekuti yaimboshandiswa senzvimbo yekuchinjana.
Nekudaro, iyo iyo nguva iyo ruvara rwunotanga kupera, inova isina kukodzera kune yakasarudzika zvinangwa zvawakazvitenga kuti ushumire.
Avhareji yaigona kuirasa. Asi iwe haufanire kudaro. Muchikamu chino, iwe unozodzidza maitiro ekugadzirisa marara akapera matambudziko pasilika yako. Ramba uchiverenga!
Tisati tapinda mumatanho, zvingave zvakanaka kuti iwe uzive zvimwe chokwadi nezve sirika.
Chokwadi nezve silika
Silika inonyanya kugadzirwa neprotein inonzi fibroin. Fibroin is fiber yemuzvarirwo inogadzirwa nezvipembenene zvinosanganisira uchi nyuchi, mahoneti, masvosve anoruka, honye dzesilika, uye nezvinodiwa.
Kuve jira rinopinza zvakanyanya, ndeimwe yemachira akanakisa ekugadzira majasi ezhizha.
Iye zvino ngatitaurei nezvekupera kwemavara.
Ruvara kupera mu silika
Ruvara kupera runoitika kana iyo pigment iri musirika ikarasikirwa neayo mamorekuru kukwezva nejira. Mukudzoka, izvo zvinhu zvinotanga kurasikirwa nekubwinya kwazvo. Uye pakupedzisira, shanduko yemavara inotanga kuoneka.
Wati wakambozvibvunza here kuti nei silika vara ichipera? Chikonzero chakakurumbira kubhenesa. Dzimwe nguva, nekuda kwekuchinja kwemakemikari. Asi muzviitiko zvakawanda, kupera kunoitika nekuda kwekuramba uchionekwa nechiedza chezuva.
Zvimwe zvikonzero zvinosanganisira - kushandiswa kwemadhayi emhando yepamusoro, matekinoroji asina kukodzera kudhaya, kushandiswa kwemvura inopisa yekuwacha, kupfeka, uye kubvarura, zvichingodaro.
Nzira yakanakisa yekudzivirira ruvara kupera musirika ndeyekuteerera kumirairo yemugadziri. Ngatimhanyei nehumwe hwayo - Usashandise mvura inopisa kupfuura yakakurudzirwa, yekuwachira, dzivisa kugeza nemuchina wekuwachisa, uye shandisa chete sipo dzinokurudzirwa uye mhinduro yekurapa.
Matanho ekugadzirisa silika yakadzima
Kutsva hakusi kwakasiyana nesiriki, rinenge jira rega rinopera kana ratarisana nemamiriro akashata. Haufanire kuyedza yega mhinduro imwe inouya kwauri. Aya anotevera akareruka mishonga yekugadzirira kugadzirisa yakasviba sirika.
Maitiro ekutanga: Wedzera munyu
Kuwedzera munyu pakushambidza kwaunoita ndeimwe yemishonga yekuita yako yakapera sirika zvinhu zvioneke kuva zvitsva zvakare. Iko kushandiswa kweyakajairika midziyo yemumba senge hydrogen peroxide yakasanganiswa nemvura yakaenzana haina kusiiwa kunze, nyorovesa silika kune iyi mhinduro kwenguva yakati wobva washambidza zvakanaka.
Maitiro maviri: Soak nevhiniga
Imwe nzira yekubuda ndeyekudzika nevhiniga usati wageza. Izvo zvinobatsirawo mukubvisa kutarisa kwakadzima.
Maitiro matatu: Shandisa baking soda uye dhayi
Nzira mbiri dzekutanga dzakanyanya kukodzera kana jira rakadzikira semhedzisiro yemavara. Asi kana iwe ukavaedza ivo uye silika yako ichiri yakasviba, unogona kushandisa kubika soda nedhayi.
Maitiro ekugadzirisa iyo yakadzima nhema silika pillowcase
Heano akareruka anokurumidza ekugadzirisa matanho iwe aunotora kuti udzore kupenya kweako kwakadzima sirika pillowcase.
Izvo zvaunofanirwa kuita usati watenga machira esilika
Usati wawana machira esilika, kumbira wako anogadzira kuti akupe iwe bvunzo mushumo we colorfastness yejira re silika. Ndine chokwadi chekuti hauzodi jira resilika rinoshandura ruvara mushure mekuwacha kaviri kana katatu.
Unogona kusarudza kukanganwa zvimwe zvechirevo kana iwe uri mutengi akananga. Sveta seSGS bvunzo mushumo . Nekudaro, kuita izvi semutengesi kunogona kumisikidza bhizinesi rako paslip pasi. Iwe neni tinoziva izvi zvinogona kudzinga vatengi kure newe kana micheka ikashata.
Asi kana iyo bvunzo mushumo isipo, unogona kumhanya nekuzviongorora pachako. Kumbira chikamu chemucheka wauri kutenga kubva kumugadziri uye geza nemvura yakasangana nemvura yegungwa. Mushure meizvozvo, chengetedza nesimbi inopisa yekuwachira. Zvese izvi zvaizokupa iwe pfungwa yekuti yakasimba sei iyo sirika zvinhu.
Post nguva: Sep-04-2021